कुन ब्लड ग्रुपलाई कोरोनाको बढी खतरा ? - News from Nepal
बिहि, चैत्र ६, २०७६
मानिसको रगतको आधारमा कोरोना भाइरस संक्रमण फरक हुने चिनियाँ अनुसन्धानले देखाएको छ। पछिल्लो अध्ययनअनुसार ए ब्लड ग्रुप भएका मानिसलाई कोरोना भाइरसको प्रभाव धेरै पर्ने र ओ ब्लड ग्रुप भएका मानिसहरुलाई कम प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
पहिलो पटक कोरोना भाइरस देखिएको चीनको वुहानमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार चीनमा मृत्यु हुने अधिकांश मानिसहरु ए ब्लड ग्रुप छन् ।
साउथ चाइना मर्निङ पोस्टकाअनुसार पनि वुहानमा भाइरस संक्रमित हुने र भाइरसको लक्षण देखिने धेरै मानिसहरु ए ब्लड ग्रुप देखिन्छन् । ओ ब्लड ग्रुपका मानिसहरु कम संक्रमित भएको अनुसन्धानले जनाएको छ ।
वुहानमा भाइरसका संक्रमित हुने २०६ जनाको रगत परिक्षण गर्दा ६३ प्रतिशत ए ब्लड ग्रुपका थिए भने ५२ प्रतिशत ओ ब्लड ग्रुप भएको पाइएको छ । ओ भन्दा ब्लड ग्रुप ए भएका मानिसहरु बढी भाइरस संक्रमितपछि मृत्यु भएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
ए ब्लड ग्रुप भएका मानिसहरुले संक्रमण हुनबाट बच्‍न थप सावधानी अपनाउन पर्ने अधिकारीहरुले बताएका छन् । तर ओ ब्लड ग्रुपका मानिसहरुमा कोरोना संक्रमण हुने कम मात्र जोखिम रहेको जनाएका छन् ।
अहिले अमेरिकामा ४४ प्रतिशत मानिसको ब्लड ग्रुप ओ छ भने ४१ प्रतिशतको ए छ । १ करोड १० लाख मानिस रहेको वुहानमा ब्लड गु्रप ओ भएका मानिस ३२ र ए का ३४ प्रतिशत छन् ।
यो अध्यनन बेइजिङ, वुहान, सांघाइ र सेन्जेन सहरका डाक्टर र वैज्ञानिकहरू मिलेर गरेका हुन् तर यसको यसको ‘पियर रिभ्यू’ हुन अझै पनि बाँकी छ ।
यदि कोही व्यक्ति ओ ब्लड ग्रुप छन् भने पनि उनी भाइरसबाट पूर्ण रुपमा सुरक्षित हुन्छन् भन्‍ने होइन। सबैले सम्पूर्ण सावधानी अपनाउनै पर्छ ।
औषधि पत्ता लागेको छैन, कसरी भइरहेको छ कोरोनाको उपचार ?
सुगर र प्रेसरका बिरामीलाई कोरोना संक्रमणको जोखिम !
लकडाउनको अवधिमा कोठाभित्रै सक्रिय बन्ने ५ उपाय
चिनियाँ अध्ययन भन्छ- ब्लड ग्रुप एलाई कोरोनाको संक्रमण बढी, ओलाई कम
कोरोना भाइरसको महामारी : चीनमा कम हुँदै, विश्वभर फैलिँदै
एक लाखमा कोरोना, ५६ हजार निको भए
‘कोरोनाको संक्रमण रोक्न गाउँपालिकाले सबै स्रोत साधन प्रयोग गरेको छ’
कोरोना संक्रमणबाट मर्नेको संख्या ९५ हजार नाघ्यो, १६ लाख बराबर संक्रमित
काँग्रेसले दियो गलकोटका स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधिलाई स्वास्थ्य सामग्री
कट्टा हुने भयो प्रहरीको तलब
कोरोना भाइरसबाट २४ घण्टामा ८२ हजार ३६७ नयाँ संक्रमित, ६ हजार ३६९ को मृत्यु
आज २०७६ चैत २७ गते विहीबारको राशिफल
निसीखोला र तमानखोला गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेसले बाढ्यो स्वास्थ्य सामग्री
पश्चिम बागलुङमा स्वास्थ्य सामग्री बाँढ्दै कांग्रेस
कुँडुलेका २३ विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग
इटालीमा घरैमा मर्न बाध्य छन् संक्रमितहरू
काँग्रेस नेता कुवँरको टोली गाउँ–गाउँमा पुगेर स्वास्थ्य सामग्री बाढ्दै
प्रेमीसँग २७ मिनेट फोनपछि आपत्तिजनक अवस्थामा भेटेका देवरको हत्या
घर फर्किने योजना बुन्दाबुन्दै संसारबाट बिदा भए थोक्मे